Wararka Maanta: Arbaco, Dec 26, 2012-MADAXWEYNE XASAN SHEEKH: “Madaxda dalka Kenya waxaan kala hadalnay Ilaalinta Dadka Soomaaliyeed iyo Hantidooda”
Xasan Sheekh ayaa sheegay in madaxda Kenya ay aqbaleen inay ilaaliyaan hantida iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi, ayna joogitaankooda Kenya waafajiyaan sida uu qabo sharciga dalkaas.
“Madaxda Kenya waxaan kala hadalnay sidii lagu ilaalin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi iyo hantidooda, iyaguna way naga aqbaleen,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu sheegay in sidoo kale ay madaxda Kenya u sheegeen in dowladda Soomaaliya uu waajib ka saaran yahay ilaalinta hantida Soomaalida ee taalla Nairobi, maadaama ay tahay hanti ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed.
Dalka Kenya ayaa waxaa dhawaanahan ka socday howlgallo ay ciidamada Kenya ku qabqabanayaan Soomaalida aan sharciga lahayn ee ku sugan Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii oo ay degto Soomaalida, halkaasoo ay qaraxyo ka dhacayeen bilihii ugu dambeeyay.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli ay dowladda Kenya soo saartay amar ay dadka Soomaalida ah ku siinayso inay dih ugu laabtaan xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab halkaasoo ay ka jiro amni-darro xooggan.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ayaa safarro kusoo maray dalalka Kenya iyo Uganda oo ay ciidammo ka joogaan Soomaaliya, waxayna halkaas kula kulmeen dadka Soomaaliyeed eek u nool iyagoo ka dalbaday inay dhaqaale ku taageeraan dowladda.